တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: poem 4
I miss RC2 so much too.. remember the Youth canteen, Main canteen inside the campus, Harmony at the entrance gate, and street vendors (Pork).. and last but not the least>>> Pretty Girls of RC2 :D.
ကျမတို့တုန်းက ဟာမိုနီ မရှိသေးဘူး။ ကောင်မလေးတွေပေါပေမဲ့ အရမ်းခေတ်ဆန်ဆန်တွေသိပ်မ၀တ်ကြသေးဘူး။ အတန်းထဲမှာ ဘောင်းဘီဝတ် ပြီးကျောင်းတဲ့ တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပဲရှိတယ်။ ဆံရစ်ဝိုင်းနဲ့တက်တဲ့ကောင်မလေး တယောက်လဲရှိတယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်ကတော့ တော်တော်အကြည့်ခံရတာပဲ။
10/11/2006 5:42 PM
ah ma tot pae pyaw tot byar.kyun taw ga bel lo lwan ya mhan taung ma thi woo.kyaung mha ma tet lite ya der koe.:(
10/12/2006 8:28 AM
အာရ်စီတူး မတက်ဖူးပေမယ့် စော်တွေ မိုက်တာကိုတော့ သိတယ်။ လွမ်းတယ်ဂျာ...
10/12/2006 4:22 PM
RC2 student life is the best part of my life and I really deeply miss RC2.
I will never forget RC2 in rest of my life.
Sadly we can’t go back to those times we spent.
10/13/2006 12:52 AM
I also remember HARMONY, 'coz of KhineThinKyi: :P guys, seeee? who remember this case?
10/13/2006 4:30 AM
ခိုင်သင်းကြည်ကိစ္စကြားလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျမက အာစီတူးမှာမရှိတော့ပေမဲ့ မောင်လေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မို့ အဲဒီသတင်းကိုသိရတယ်။ တော်တော်လေးဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာပဲ။
ဒီပို့စ်လေးတော့ကြိုက်တယ် မမေ-ရေ၊ ကျနော်လည်းပဲ (၂)နှစ်ထဲတက်ခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကို တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အရသာအနေနဲ့ အမြဲတသသဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒီအချိန်တွေက (ခုထက်တော့) အများကြီး ပို ရိုး သား ဖြူ စင် ခဲ့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးဗျာ။
အာရ်စီတူးတဲ့ သူများတွေပြောသံ၊ အစ်မကြီးတွေ၊
မတက်ရမရှိအောင်ဆိုပြီး ငယ်တည်းက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရူးခဲ့တာ၊
ဆယ်တန်းလဲအောင်ရော ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ဖြစ်တယ် အစ်မနဲ့
အောင်စာရင်းကို အာရ်စီတူးမှာ သွားကြည့်ရတယ်
တော်သေးတာပေါ့ ဘွဲ့ယူတော့ မိန်းထဲသွားယူရလို့
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမထဲ တစ်ဘ၀မှာ တစ်ကြိမ်တော့ ရောက်ဖူးသွားပါတယ် :)
1/21/2007 4:44 AM
RC-2 တည်းကို ၂ခါပဲ ရောက်ဖူးတယ်။ ကျောင်းတက်ဖို့တော့ အခွင့်မသာခဲ့ဖူး...။